Waxa la cuno khamriga: isku darka wakhtiga la tijaabiyay
Sawirka: Nitrub/Sawirada Depositphotos
Aqoonyahanka cunnooyinka adduunka, William Pokhlebkin waxa uu rumaysnaa in la-hawlgalayaasha kaliya ee suurtagalka ah ee vodka ay yihiin cunnooyinka Ruushka ee qaranka. Dhaqanka miiska cuntada fudud ee Ruushka ayaa ugu dambeyntii qaabeeyey qarnigii 18-aad, kaliya waagii ugu fiicnaa ee nadiifinta guriga, sidaas darteed vodka iyo doorashooyin badan oo loogu talagalay appetizers ayaa dhab ahaantii loo abuuray midba midka kale.
Hilibka, hilibka iyo burka iyo suxuunta kalluunka ayaa ku habboon, dufan, basbas iyo milix leh waa la soo dhaweynayaa kaliya. Pokhlebkin wuxuu xusay in vodka ay kor u qaaddo isku-dhafka cuntada culus ee noocaas ah, oo soo saarta nooc ka mid ah saameynta soo-celinta: ma cuni doontid, mana ahaan doontid mid ka hor wakhtiga.
Laga soo bilaabo suxuunta hilibka, waxay macno u leedahay in la doorto bur burka, hilibka jellied, carrabka la kariyey, dufan jelied, hilib doofaar milix ah ama ham. Waxa ay u muuqataa in aanay jirin saaxiib ka wanaagsan oo vodka ka mid ah maraqa marka loo eego hodgepodge.
William Pokhlebkin Taariikhda vodka
Dhammaan noocyada cuntooyinka fudud, vodka, mustard iyo malayga ayaa looga baahan yahay qaybo kor u qaadaya rafcaankooda gastronomic iyo muujinta sifooyinka dhadhanka.
Cuntooyinka kalluunka, dabcan, waa herring dhaqameed oo leh saliid gabbaldayaha iyo basasha, caviar (haddii sidoo kale leh canjeelada, ka dibna quruxda guud), sturgeon jellied iyo smelt sigaar cabbin, muksun, omul iyo salmon casaan.
Khudaarta, wax walba waa iska cad yihiin: pickles iyo yaanyada, sauerkraut iyo boqoshaada, pickles ama pickles. Vinaigrette waxay ku fiican tahay vodka (Pokhlebkin waxay bixisay ikhtiyaar leh ukun la jarjaray iyo qadar yar oo herring ah) iyo xitaa baradhada la kariyey, haddii ay la socoto herring leh basasha iyo subagga.
Cuntooyinka fudud ee vodka: bur burka, hodgepodge, herring leh saliid gabbaldayaha iyo basasha, kalluunka sigaar cabbin, qajaarka la shiilay, vinaigrette.
Sawirka: belchonock / Depositphotos
Cadaan, kalluumeysi, casaan, hilib: qaanuunka la taaban karo ee noocan oo kale ah ayaa badanaa la raacaa marka la dooranayo khamriga cuntada. Dhab ahaantii, wax walba waa mid aad u xiiso badan. Waxa ugu muhiimsan ee la ogaado: dhadhanka dhadhanka iyo udgoonka khamriga, ka fudud, dhexdhexaad ah oo jilicsan waa inuu ahaadaa appetizer.
Sidaa darteed, ka tag suxuunta dhadhanka leh oo leh dhir udgoon iyo suugada khamriga, taas oo dhadhanka aan si fudud loo ilaawi karin. Tusaale ahaan, Cabernet Sauvignon, Zinfandel ama Merlot waxay saaxiibo fiican ka dhigtaan maraqa hilibka basbaaska leh, laakiin Sauvignon Blanc waxay u ekaan doontaa mid ka soo horjeeda asalka, laakiin kalluunka, taasi waa wax.
Mid kale oo cajiib ah oo aan ahayn talada ugu cad, markaad dooranayso khamri, waxaa hagaaya qaabka saxanka: haddii si cad loo muujiyo, markaa khamrigu waa inuu sidoo kale leeyahay dabeecad. Sidaa darteed, hilibka lo'da ee la dubay, khamriga tart ayaa ku habboon marka loo eego hilibka lo'da ama fuud.
Xaalad aad rabto inaad naftaada ku xaddido cunto fudud, farmaajo waa ka baxsan tartanka. Waxay si fiican ugu socotaa khamri cad, laakiin waxaad ku dhejin kartaa casaan. Camembert iyo Brie waxay ku fiican yihiin labada Riesling iyo Beaujolais ama Pinot Noir, Cheddar iyo Gouda waxay ku fiican yihiin Chardonnay, Zinfandel iyo Shiraz. Mozzarella, feta iyo jiiska riyaha ayaa ka dhigaya wehelka ugu fiican Chablis, Chardonnay, Pinot Gris iyo Chianti.
Khamri iyo miro, isku-dhafka ku habboon marka ay timaaddo khamriga, dhadhanka iyo udgoonka kuwaas oo qoraallada miraha ah si cad loo maqli karo: nutmeg ama Gewürztraminer. Haddii aad rabto inaad tijaabiso, isku day Gewürztraminer isku mid ah ama Riesling oo leh suxuunta Aasiya, isku-dhafka ayaa ballan qaadaya inuu noqdo mid xiiso leh.
Dhanka khamriga dhalaalaysa, brut iyo semi-qallalan waxay ku fiican yihiin digaaga, kalluunka iyo cuntooyinka badda. Hilibka dufanka leh iyo suxuunta basbaaska leh, kuwani maaha saaxiibada ugu fiican, inkasta oo aan la mamnuucin in la cabbo hilibka doofaarka leh. Khamriga dhaldhalaalaya badh-macaan u badbaadi macmacaan, laakiin xusuusnow in aanu noqon mid aad u xayndaab. Tusaale ahaan, macmacaanka bariga hubaal maaha mid ku haboon, khamriga wanaagsan ee ka soo horjeeda asalkooda ayaa u muuqan doona mid weli dhanaan ah.
Meesha ugu dambeysa, waxaa jira khiyaamo khiyaamo: dooro suxuunta la xidhiidha cunnada gobolka uu khamrigaagu ka yimaado. Aad bay u adkaan doontaa in la seego.
Cuntooyinka fudud ee khamriga: suxuunta hilibka, jiiska, miraha, macmacaan dhexdhexaad ah oo macaan.
Sawirka: Shaiith79 / Sawirada Depositphotos
Waxay u ekaan kartaa, maxaad wax u hindisaysaa marka ay jiraan kalluun milix leh, jiis doofaar iyo jajabyo adduunka ah? Uma baahnid inaad soo bandhigto oo aad cabto biirka buskudka, laakiin habkan doorashada cunto fudud ma jirto dhiirigelin ama duullimaad fikir. Beer wanaagsan, cunto wanaagsan.
Halkan waxaa ah lager khafiif ah, tusaale ahaan, biir iftiin iyo nasasho leh oo si fiican ula socda suxuunta basbaaska leh ee dhadhan qani ah. Wax kasta oo ka yimid Talyaani, Isbaanish ama cunnada Meksikaanka, oo qumman. Haddii kala duwanaanshiyaha aysan ahayn mid soo jiidasho leh, waxaa jira digaag, cunto badeed ama cunto fudud oo caadi ah, kubbadaha jiiska, shiilan iyo dhammaan walxahaas. Doorasho aad u fudud, farmaajo, way fiicantahay in la doorto noocyo jilicsan ama kuwa adag.
Shirkad u qalma oo loogu talagalay biirka sarreenka ah ee aan la sifeynin waxay noqon doontaa saladh khudradeed khafiif ah (dhawaaqa yaab leh, laakiin runtii waa), suxuunta badda (oo ay ku jiraan sushi iyo duub) iyo sausages Bavarian.
Iyada oo leh ales, wax walba waa sahlan yihiin, dooro hilibka, ma khaldami doontid. Burgers, steaks, baalasha digaaga oo leh suugo kulul, pizza, cunto aan lahayn wax ismoodsiin gaar ah, taas oo si fiican u hadhsan doonta dhadhanka biirka.
Xamaaliga iyo xamaaliga waxaa loo sameeyaa dadka jecel inay wax cabbaan oo si siman wax u cunaan. Halkani waa halka ay ka soo galaan madaafiicda culculus: maraqa, goulash, qasacadaha baradhada iyo hilibka la dubay. Laga soo bilaabo lama filaan ah, shukulaatada, macmacaanka ku salaysan iyo macmacaanka leh qaxwaha iyo karamell. Haa, biirku waa saaxiibo ma aha oo kaliya dhegaha doofaarka iyo bream engegan. Brownie-ga ugu fudud ayaa ka dhigi doona shirkad aad u wanaagsan oo leh galaas xamaali ah.
Lambic waxay ku fiican tahay macmacaanka fudud, cheesecakes, jalaatada iyo miraha, waxaana lagu soo bandhigi karaa qaab kasta: xitaa naftooda, ugu yaraan sida qayb ka mid ah saladh miro ah. Haddii aad rabto inaad si fiican u cunto, hilibka leh miro ama suugo berry ayaa noqon doona mid aad u habboon.
Cuntooyinka beerka fudud: jiiska, hilibka iyo suxuunta digaaga, cuntooyinka badda, macmacaanka shukulaatada, karamell iyo kafeega, miraha.
Sawirka: Denisk999 / Depositphotos
Fiiro gaar ah, waxaan ka jeexnaa daboolyada: cognac, mabda'a, uma baahna cunto fudud. Cabitaanka wanaagsan laftiisa ayaa ku fiican, laakiin waxba ma caawin doono cognac caajis ah.
Haddii aad weli rabto inaad hesho cunto fudud, hilib caato ah, jiis adag iyo shukulaatada madow ayaa ku caawin doona. Tartlets Caviar ama sandwiches-ka bacaha ayaa ku imaan doona anfaca, sidoo kale miraha, isteroberi ama canabka oo lagu dari karo saxan farmaajo. Cuntooyinka badda iyo boqoshaada inta badan looma tixgeliyo cunno-cunto, laakiin micne-darro, isku day, tusaale ahaan, saaxiibo la leh cognac iyo bruschetta oo leh boqoshaada duurjoogta ah.
Qabashada cognac leh liin waa fikrad aad shaki badan, sababtoo ah waxay gabi ahaanba joojisaa dareenka cabitaanka. Xaaladda cognac xun, tani xitaa waa tan ugu fiican, laakiin maxaad u cabtaa cabitaanka noocaas ah?
Cuntooyinka fudud ee Cognac: shukulaatada, hilibka, jiiska, miraha, cuntooyinka badda, boqoshaada.
Sawirka: bhofack2 / Sawirada Depositphotos
Whiskey iyo xabxabka, duurjoogta jaleecada hore ee isku darka ah oo weli xaq u leh nolol. Miraha iyo berry waxay u noqon karaan wehel wanaagsan oo la socda whiskey, markaa u kaydi isteroberi, tufaax, fersken iyo canabka diyaafadda soo socota.
Cuntooyinka badda ayaa ah ikhtiyaar aad u fiican, sidoo kale kalluunka cas sida salmon ama salmon khafiif ah oo cusbo leh. Hilibku sidoo kale wuxuu noqon doonaa mid ku habboon haddii loo soo bandhigo qaabka hilibka doofaarka, ham ama duban.
Ugu dambeyntii, farmaajo, cuntada ugu badan ee suurtogalka ah. Ma jiraan xayiraad adag, labadaba jilicsan iyo noocyo adag ayaa sameyn doona. Qofna kuma garaaci doono gacmaha, xitaa tijaabooyinka whiskey iyo jiiska buluuga ah, laakiin waxa, raadinta isku-dhafka cusub, waa ganacsi ammaan ah.
Cuntooyinka fudud ee Whiskey: miraha, cuntooyinka badda, hilibka, jiiska.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, Waxa la cuno khamriga: isku darka wakhtiga la tijaabiyay!